Rwendo rweEndaneti kuInbox | Martech Zone
China, April 26, 2012 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu tanga tichingokurukura mune zvemukati zvekushambadzira kudzidzisa webinar nhasi nekambani yenyika sei email dhizaini uye email kushambadzira mashandiro zvachinja nekuda kwenzira iyo vatengi yavanopa pamwe nemashandisirwo anoitwa nharembozha email. Iine makumi matatu muzana emaimeri ari kuverengwa pane mbozhanhare, zvakakosha kupfuura nakare kose kugadzira maemail ako nemazvo… uye vaedze!
Kutumirwa neemail kunogona kuramba kuchikanganisa, kunyangwe uine ruzivo urwu. Ita tsika yekuyedza meseji yaunotumira kune makuru maemail vatengi usati watumira Litmus inopa mazuva manomwe email yekuyedza kuyedzwa pane ese matsva ekunyorera!
Vakaisawo izvi zvinobatsira infographic munzira iyo email inotora kuInbox, chii chingaenda zvisirizvo, uye kuti ungachigadzirisa sei!
Tags: dhirivaharieemail kuburitswaemail rwendoemail kupaemail kuedza